Andro: 15 Desambra 2019
Madrid Metro Mapet Timetables sy ny tapakila
Ny fanandramana sarintany sy ny tapakila tapakila ao Madrid: Madrid metros mitondra mpandeha 560,9 tapitrisa isan-taona dia efa nisy nanomboka ny taona 1919 ary nokarakarain'ny Metro de Madrid. Tambajotra Metro 13 lalana sy 182,1 kilaometatra [More ...]
Zonguldak Karabük Fandaharana fiaran-dalamby nohavaozina
Zonguldak Karabuk Train jadona nohavaozina; Ireo fiaran-dalamby ireo dia miasa isan'andro eo anelanelan'i Zonguldak> Karabük> Zonguldak. Ireo dia mitondra an'i Zonguldak, Kapuz, Inagzi, Kilimli, Catalagzi, Isikveren, Kazkoy, Muslu, Göbü, Turkali, Filyos, [More ...]
Ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina Lakes Express dia manintona mahaliana ny vahoaka
Ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina Lakes Express dia manintona mahaliana anao amin'ny olom-pirenena; TCDD Transportation Co. 7. Ny talen'ny faritra Murat Selet sy ny mpitantana mpandeha Mustafa Çelik, TCDD Taşımacılık A.Ş. 3.Habil Manager Habil Emir sy mpandeha [More ...]
Oram-barotra BTSO Jentera UR-GE Firenena 3 Export Nampitombo ny tahan'ny 35
Bursa Chamber of Commerce sy Industry dia manome tanjaka ny fampiroboroboana ny orinasam-pifandraisan'ny orinasa miaraka amin'ny tetikasa Ur-Ge. Raha ny mpikambana ao amin'ny sehatry ny masinina Ur-Ge Project dia nitombo ny fanondranana 3 35 isan-taona, ny asa dia nanomboka tamin'ny tetik'asa Ur-Ge vaovao. [More ...]
Fiaran-dalamby iray no namely fihenan-dàlana tao Kars. 400 metatra ao anaty fiara tsy mataho-doza 3 no maty tamin'ny loza. Ny zotram-piaramanidina 3033-847, izay mandeha ao amin'ny Kars-Erzurum, dia eo amin'ny haavon'ny fiampitana ao an-tanànan'i Alisofu. [More ...]
Fanaraha-maso henjana ny fiara fitateram-bahoaka ao Manisa
Fanaraha-maso henjana momba ny fitateram-bahoaka ao Manisa; Ireo ekipa mpitandro ny filaminana ao amin'ny departemantan'ny Kaominaly Manisa Metropolitan dia manohy ny fisafoana ataon'izy ireo amin'ny fiara manome serivisy fitateram-bahoaka manerana ny faritany. Amin'izao toe-javatra izao, ny distrikan'i Turgutlu [More ...]
Tetikasa Anatolia atsimo-atsinanana (GAP)
Tetikasa Anatolia atsimo atsinanana (GAP); Ny tanjona voalohany amin'ny tetik'asa dia ny hampiakatra ny fari-piainan'ny mponina ao amin'ny faritra sy hanatsarana ny fari-piainan'ny mponina, hanesorana ny fahasamihafana eo amin'ny fampandrosoana eo anelanelan'ny Atsinanana Anatolia sy faritra hafa, ary hanatsarana ny vokatra sy tombontsoa amin'ny asa any ambanivohitra. [More ...]
1948 - 1957 Torkia Road Program
1948-1957 Program an'ny lalana sivy taona dia nekena ho lentika amin'ny lafiny teknolojia fanamboaran-dàlana ao amin'ny firenentsika ary miaraka amin'izany, ny programa dia nahafahan'ny nanangona ny sehatra tsy miankina. Ny fahombiazan'ny fandaharana [More ...]
1923 - 1940 Torkia lalamby History
1923 - 1940 Torkia lalamby History; Ny politikan'ny lalamby, izay mikendry ny hanangana ny firenena miaraka amin'ny vatofantsika, dia nanjary iray amin'ireo andry lehibe amin'ny fizotry ny famoronana tsenam-pirenena. Famerenana ireo andalana nopotehina nandritra ny ady, na dia kely fotsiny aza [More ...]
Izmit Beach Park Park dia miala amin'ny Extra Lane
Ny lalambe fanampiny namboarina teo am-pivoahan'ny Izmit Beach Car Park dia ahafahan'ny fiara mivoaka moramora kokoa. Ny kaominina Kocaeli Metropolitan, izay nametraka tetikasa maro hanalefaka ny fifamoivoizana dia nanohy ny fandaharana nataony tao amin'ireo ivon-tanàna. Metropolitan [More ...]
Izmit Office Travel Card dia nifindra tany amin'ny toerana vaovao
Ny faritry ny serivisy atolotra ho an'ny olom-pirenena nomen'ny Kocaeli Metropolitan Munisipalin'ny Kaominaly momba ny fitaterana sy ny fitantanana fifamoivoizana. Ao anatin'izany sakana izany, ny Birao foiben'ny Travel Travel, Mimar Sinan Overpass amin'ny morontsiraka [More ...]
Fa maninona no voaorina ny lalamby amerika Atsinanana-Andrefana?
Ny fanamboarana lalamby voalohany manerana ny kaontinanta iray dia nanomboka tany 1863 any Etazonia ary vita tamin'ny Mey 1869. Ny hevitra momba ny fanamboarana ny lalamby dia natolotr'i Asa Whitney tao amin'ny Kongresy tamin'ny 1845. Ny zava-dehibe an'i Abraham Lincoln [More ...]
15 Desambra 2017 Uskudar Umraniye Cekmekoy Sancaktepe Subway Station
Androany amin'ny tantara 15 Desambra 1912 Rad-su-Aleppo-Tripoli (203km) dia nosokafana teo amin'ny lalamby ao Anatolian Baghdad. 15 Desambra 1917 Crown Prince Vahidettin sy Mustafa Kemal Pasha tonga tany Alemaina tamin'ny alàlan'i Sofia-Budapest-Vienna tamin'ny fiara tsy miankina nampitohy ny lamasinina Balkan [More ...]